Ny tsara indrindra amin'ny vaovao momba ny QGIS 3.X
Mahaliana ny fomba nahaizan'ireo fandraisana andraikitra Open Source hikolokolo ny tenany amin'ny fomba milamina sy hanomezana fahafaha-manao asa ho an'ireo izay manana sanda fanampiny hanampy; raha mamela ny fanoloran-tena ho an'ny fototry ny orinasa mahafantatra fa ny fepetra takiana dia ho rakotry ny manam-pahaizana hafa amin'ny orinasany. Anisan'ireo maodely ireo, WordPress dia mendrika ny hoderaiko, ...
Vaovao rehetra avy amin'ny QGIS
Ity dia lahatsoratra fandinihana ireo vaovao rehetra nitranga tao QGIS. Amin'ity fotoana ity dia nohavaozina amin'ny kinova 2.18. QGIS dia iray amin'ireo traikefa momba ny loharano misokatra lehibe indrindra, manana ny fahafaha-mifaninana amin'ireo rindrambaiko tompona amin'ny fomba maharitra. [lohateny manaraka = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Vaovao ...
3 27 from 2.18 QGIS fanovana
Rehefa eo am-pamaranana ny androm-piainan'ny QGIS amin'ny kinova 2.x isika, miandry izay ho QGIS 3.0, ity pejy ity dia mampiseho amintsika izay tafiditra ao amin'ny QGIS 2.18.11 'Las Palmas', izay natao ofisialy tamin'ny Jolay tamin'ity taona ity. QGIS amin'izao fotoana izao dia manana fitsangatsanganana mahaliana amin'ny lafiny mpanohana vaovao, orinasa ofisialy izay ...
QGIS 3.0 - Ahoana, oviana ary inona; midika izany
Manontany tena ny maro amintsika: rahoviana no havoaka ny QGIS 3.0? Tamin'ny taon-dasa (2015) dia nanomboka nanadihady ny ekipan'ny tetikasa ny fotoana sy ny fomba hamoahana ny QGIS 3.0. Nampanantena izy ireo, araka ny lahatsoratr'i Anita Graser, fa hampita mazava tsara ny drafitr'izy ireo amin'ny mpampiasa sy ny mpamorona alohan'ny ...
Qgis - Ireo fonosana Thematize mifototra amin'ny saha misy ny lakilen'ny cadastral
Ny tranga: Manana ny vilanin'ny tanàn-dehibe iray aho, miaraka amina fampifanarahana manan-danja amin'ny cadastral amin'ireto fomba manaraka ireto: Sampan-draharaha, Kaominina, Sehatra, fananana. toy izany ny nomenclature dia noforonina araka ny aseho amin'ny sary: ​​Ohatra: 0313-0508-00059 Ny filàna Ny toe-javatra dia liana amin'ny fahaizako manavakavaka ny teti-dratsy miorina amin'ny rojo faharoa, dia ...
Qgis - Ohatra iray amin'ny fanao tsara amin'ny maodely OpenSource
Isaky ny mipetraka eo alohan'ny orinasa na andrim-panjakana te-hampihatra sehatra misy fomba fitantanana teritoriary izahay, efa zatra mandre feo ratsy maro momba ny maodely OpenSource, dia miovaova kely ihany ity fanontaniana ity. Iza no manome antoka ny QGIS? Toa tompon'andraikitra sy tena ara-dalàna izahay, raha mitady hanohana ny ...
Fampitahana sy fahasamihafana misy eo amin'ny QGIS sy ArcGIS
Ny naman'ny GISGeography.com dia nanao lahatsoratra sarobidy mampitaha ny GQIS amin'ny ArcGIS, amin'ny lohahevitra tsy latsaky ny 27. Mazava fa ny fiainan'ireo sehatra roa ireo dia tsy manadino, raha jerena ny fiandohan'ny QGIS hiverina amin'ny 2002, vao nivoaka ny kinova farany an'ny ArcView 3x ... izay efa tafiditra ...
GML hanokatra misy rakitra iray mitondra QGIS sy Microstation
Ny fisie GML dia iray amin'ireo endrika ankafizin'ny mpamorona sy mpampiasa GIS, satria ankoatry ny maha-endrika anohanana sy manara-penitra ny OGC, dia mahomby tokoa amin'ny famindrana sy fifanakalozana data ao anaty rindranasa tranonkala. amin'ny fiteny XML ho an'ny tanjona ara-jeôgrafika, ny fanafohezana azy dia midika hoe ...